Video – Manoela au Magro 07 fevrier 2011 – MyDago.com aime Madagascar
Video – Manoela au Magro 07 fevrier 2011
Video Kabary Manoela Magro 28 janv 2011
Video Manoela 18/01/2011
Auteur Solo RazafyPublié le 7 février 2011 7 février 2011 Catégories Magro, Malagasy, Politique, Vidéos
4 réflexions sur « Video – Manoela au Magro 07 fevrier 2011 »
8 février 2011 à 1 h 45 min
Misaotra Manoela a!.. Efa imbetsaka aho teo amin’ity site ity milaza hoe AMPY IZAY, ARY MBOLA HAMAFISIKO IHANY: RAHOVIANA ISIKA VAO HIHETSIKA E?… Rehefa mihinana ny dikintsika?.. Miala tsiny fa hentitra sy mafy angamba ny teniko, fa rehefa kelikely angamba tsy misy na ny diky hohanina aza (satria tsy misy arapaka dia tsy misy mivoaka)!
Dia tsy tsapantsika ve ny fahoriana efa mahazo antsika?… Mpankeny amin’i Magro matetika ny tenako, ary tsy nitsahatra na teny Akorondrano, na ny teny Tanjombato, na ny teny Behoririka, fa dia olona tsotra sy mafy ady izao no sahy milaza hoe « ianaro tsy mankaty ireo no efa manana ny haninareo, fa izahay kosa dia tsy misy arapaka ka dia miezaka hamerina ny ara-dalàna!….
Efa mbola tena misy arapaka marina tokoa ve ianareo ka na dia ny hanampy ny sahirana mpiray Tanindrazana aza tsy ataonareo?… Andao re mba hanatevin-daharana anay eny amin’ny Magro e! Andao re mba hiaraka hitraka amin’izay e!.. Efa fantantsika izao ny marina, dia aiza isika?
8 février 2011 à 6 h 13 min
Tsarovana mandrakariva ato an-tsaina ny anaranareo sy i Constant: mahery fo eto amin’ny firenena.
Satriko dia satriko ry Ziry,
dia topazana maso ihany koa ny valan-dresaka (mivalana zany fôna, zany fôna)
vao nataon’itony Ratsirahonana fa tena… LOI DU PLUS FORT izany an! (amin’ny alalan’ny fitaovam-piadiana)
Fa tsy sarotra eritreretina matoa izy mahavita mamoaka izany teny izany: FRANC-TAY fôna Frantay fôna Frantay fôna….
Antimo, tany milevim-bola
Mampahatsiaro an’i Zafiahy !
Heno ny fanontaniana napetrany raha nitodika tamin’Antananarivo izy : « tantinareo ve ny fijaliana? » Azoko ampiana hoe « mitovy razana amin’ny Ratsirahonana tsy mifady fanonganam-panjakana ve anareo »?
Ny ahy ny valiny dia tsotra, « TSIA », satria tsy mitovy velively amin’ilay mitondra solon’anarana eto hoe « iarivo » ny fanabeazana ahy. Marihiko eto koa fa maro fiavihana ny eto Antananarivo!!!!!!
Précédent Article précédent : Video – Enquête sur le 07 février 2009 (rediffusion)
Suivant Article suivant : Video – Raveloson Constant – Magro 07 fev 2011